JPG CONVERTER အွန်လိုင်း DWG - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် JPG format နဲ့မှ DWG ပြောင်း
ကြည့်ရှုပုံရိပ်တွေများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး applications များ DWG ဖိုင်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြပါဘူး။ သင်ဤအမျိုးအစားများ၏ဂရပ်ဖစ်တ္ထုရဲ့ contents ကြည့်ချင်လျှင်, သင်ဥပမာအားဖြင့်, JPG, အွန်လိုင်း converter ကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ရာ, တစ်ဘုံ format နဲ့မှသူတို့ကိုပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာအတွက်ခြေလှမ်းအရေးယူမှုအားဖြင့်အဆင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အွန်လိုင်း Converter DWG PDF ကို-File ကိုမှ
အွန်လိုင်း JPG မှ DWG convert
ဒီဦးတည်ချက်အသွင်ပြောင်းအတော်လေးလူကြိုက်များပြီးကတည်းကအတော်လေးအနည်းငယ်အွန်လိုင်း converter, DWG ကနေ JPG မှဂရပ်ဖစ် convert ရှိပါတယ်။ Next ကိုငါတို့သညျသူတို့၏အကျော်ကြားဆုံးအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Zamzar
လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်း converter ကို Zamzar တစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း JPG format နဲ့ DWG ဖိုင်များကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုပံ့ပိုးသောအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
DWG format နဲ့မှဖိုင်ကို download လုပ်ပါရန်အထက်ပါလင့်ခ်ကနေတဆင့်အဓိက Zamzar ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ ... ".
အဆိုပါပုံဆွဲပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းသည်အဘယ်မှာရှိ directory ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရာအတွက်စံဖိုင်ရွေးချယ်ရေးပြတင်းပေါက်။ အရာဝတ္ထုစာနယ်ဇင်းခွဲခြာပြီးနောက် "ပွင့်လင်း".
ဖိုင်ကိုန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်, ဦးတည်ရာကို format ကိုရွေးဖို့ကိုလယ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုပြောင်းပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ:"။ DWG format ကိုပြောင်းလဲဘို့မရရှိနိုင်ခရီးစဉ်၏တစ်ဦးကစာရင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ "JPG".
ဒါကြောင့်ပြီးစီးပြီးနောက်, စာမျက်နှာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် JPG format နဲ့မှဖိုင်ကို download လုပ်ပါဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်".
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်ပစ္စည်းကယ်တင်ဖွင့်လှစ်။ သင် image ကိုသိမ်းဆည်းထားချင်ရှိရာ directory ထဲတွင်ရှိ သွား. , ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save".
အဆိုပါပြောင်းလဲပုံ ZIP ဖိုင် archive ကိုအတွက်သတ်မှတ်ထားသော directory ထဲတွင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ပုံမှန်ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူကို အသုံးပြု. ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်, သင်ပထမဦးဆုံးဖိုင်ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်ဇီပ်ကိုရပေမည်။
Method ကို 2: CoolUtils
JPG format နဲ့ DWG ဂရပ်ဖစ်တ္ထုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူကြောင်းနောက်ထပ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု CoolUtils ဖြစ်ပါတယ်။
စာမျက်နှာ CoolUtils site ပေါ်တွင် JPG မှ DWG ပြောင်းအပေါ်က link ကိုလိုက်နာပါ။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Browse" အပိုင်း "အပ်လုဒ်ဖိုင်".
ဖိုင်ရွေးချယ်ရေးပြတင်းပေါက်။ အဆိုပါ DWG, သင်ပြောင်းချင်ရှိရာ directory ကိုကရွှေ့ပါ။ ၎င်းဒြပ်စင်စာနယ်ဇင်းများ၏အထီးကျန်ပြီးနောက် "ပွင့်လင်း".
ဖိုင်ထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းစာမျက်နှာပြန်လာ, loading လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ "သတ်မှတ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများ" ကို select "JPEG,"ပြီးတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါပြောင်းလဲ file ကို Download လုပ်ပါ".
အဲဒီနောကျကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်သင် JPG format နဲ့အတွင်းပြောင်းလဲ file ကိုမထားချင်ရှိရာ directory ကိုသွားပါရ။ ထိုအခါသင်သည်နှိပ်ဖို့လိုအပ် "Save".
JPG ရုပ်ပုံရွေးချယ်ထား directory ထဲတွင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ချက်ချင်းမဆိုပုံရိပ်ကြည့်ရှုသူများကအဖွင့်အဆင်သင့်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျလကျမှာ extension ကို DWG နှင့်အတူဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန် program တစ်ခုရှိမထားဘူးဆိုရင်အဲဒီပုံရိပ်တွေကိုကျနော်တို့လေ့လာအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုတဦးတည်းကိုသုံးပိုမိုအကျွမ်းတဝင် JPG format ကိုသို့ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အော်ပရာအတွက် cache ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေ
Play စ Market ကမှအကောင့်တစ်ခုပေါင်းထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
HDMI ကနေတစ်ဆင့်တီဗီဖို့ PC ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
XLS မှ ODS ပြောင်း
Microsoft Word ကို image ကိုလှည့်ပတ်စာသားကိုစီးဆင်းမှုအောင်လုပ်နည်း
Windows ကို 10 ဘုံပြဿနာများသည်အသုံးပြုသူများတစ်ခုမှာ - မက်ဆေ့ခ်ျကို "ကျနော်တို့ကို Windows Update ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအပြောင်းအလဲများ configure နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ " ဒါမှမဟုတ် "ကျနော်တို့ကအပြောင်းအလဲများကိုကွန်ပျူတာပိတ်မပစ်ပါ Cancel အဆင့်မြှင့်ဖြည့်စွက်ရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ကြ .. '' updates များကို install လုပ်ပြီးစီးဖို့ကွန်ပျူတာကို restart ပြီးနောက်။ အမှားပြင်ပေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုအတွက် updates များကို install ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ် - ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွက်။ ဆက်ဖတ်ရန်
UltraISO အမှားဖြေရှင်းချက်: Disk ကို ပုံရိပ်ကိုလျှံ
Windows7မှာခေါက်ဂိမ်းတွေနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်း
https://termotools.com my.termotools.com © အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ 2019